Wayne Rooney Oo Dib Ugu Laabtay Kooxdiisii Hore Ee Everton+Sawirro.. – Cayaaraha dunida
Wayne Rooney Oo Dib Ugu Laabtay Kooxdiisii Hore Ee Everton+Sawirro..
Kabtankii kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Ingiriiska Wayne Rooney ayaa si rasmiya u shaaciyey inuu dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Everton.
31-jirkan u dhashay wadanka Ingiriiska ayaa iskaga tagay kooxdiiisa Manchester United oo uu heshiis dhan £26.5 Million kaga soo biiray kooxda uu haatan ugu wareegay sida xorta ah ee Everton oo uu yaraantiisii ka soo bilaabay xirfada kubada cagta.
Wayne Rooney ayaa dhamaystiray heshiis dareen leh oo laba Sano ah kaas oo uu dib ugu laabtay gegida Goodison Park ee kooxda Everton oo uu ka maqnaa mudo 13 sanadood ah.
Dhinaca kale kooxda Everton ayaa si
rasmiya u shacisay heshiiska labada sano ah ee ay kula soo wareegtay Kabtanka xulka Ingiriiska ee Wayne Rooney, waxaanu maamulka kooxdu sheegay in ciyaaryahankanki todobaadkiiba mushahar u qaadan doono £150,000.
Wayne Rooney oo ka hadlay ku biiritaankiisa kooxda Everton ayaa waxa uu yidhi “waan la guulaysan doonaa kooxdayda Everton,waxaanan dareemayaa in naadigu haatan u socda dhinicii saxda ahaa, waxaanan doonayaa inaan qayb ka noqdo guulaha kooxda Everton.”
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dib ugu soo laabto, mana sugi karo inta ciyaartoyga kooxda ku kulmayno tababarka, mana sugi karo intaan arkayo aniga oo dib ugu ciyaaraya Everton.”